Siomay Machine, okuzenzakalelayo Encrusting Machine - Fuxin
Sizimisele ukudala ibhizinisi ukudla imishini nge brand odumile. Besilokhu sikuhlupha kakhulu ngokulwela kulowo mgomo futhi ngeke sithuthukise imishini yethu izinga ukunqoba ukwaneliseka ikhasimende lethu futhi ozethembayo. Sibheke phambili ukuze ibambisane amakhasimende ethu kanye nabangani ekhaya aphesheya. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ukukhetha kithi ukukhetha izinga.
I-FX-800D ezenzakalelayo ulayini owodwa we-siomay / siomai / shu ...
I-automatic Triple Line Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Umugqa we-automatic Double Siomay / Siomai / Shumai Maki ...
Okuzenzakalelayo zamadombolo Ukwenza Machine
I-FX-910B Line-Production Line ye-othomathikhi ye-othomathikhi
Ningbo Jiangbei Fuxin Ukudla Imishini Co, Ltd.
Singumkhiqizi ochwepheshe ohlanganisa i-R & D, okokukhiqiza, wokuthengisa kanye nenkonzo yokuthengisa ngemuva kokuthengisa.
Inkampani yethu inemishini eminingi yokusebenzisa izinto ezinkulu.
Selokhu kwasungulwa le nkampani, imikhiqizo ithengisiwe ezweni lonke yathunyelwa kwamanye amazwe, yavunyelwa futhi yanconywa ngamakhasimende. Sikholelwa njalo ukuthi "Ikhwalithi iyisisekelo sokuthuthuka kwamabhizinisi, futhi ubuqotho yigqozi lokuqhubela phambili ukuthuthukiswa kwamabhizinisi". Uma unentshisekelo, yemukela ngobuqotho umbuzo wakho.
Ningbo Jiangbei Fuxin Ukudla Machinery Co., Ltd
Ikheli: Idolobhana laseXiashan, umgwaqo we-hongtang, isifunda sase-jiangbei, idolobha lase-ningbo, isifundazwe se-zhejiang (indawo yezimboni A)
Ucingo: +86 15858479773
Hambayo Ucingo: +86 18067568290
© Copyright - 2010-2019: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo ezifakiwe - Ibalazwe - Imigomo Ucingo
ezisebenzi steamed Bun Machine , steamed ezisebenzi Bun Ukwenza Machine , okuzenzakalelayo steamed ezisebenzi Bun Machine , Pan-Fried steamed ezisebenzi Bun Machine , steamed ezisebenzi Bun Machine , Household steamed ezisebenzi Bun Machine , Zonke Imikhiqizo